Momba anay - ny tanjontsika |
Miara-miasa amin'ny fanabeazana ara-pananahana tsy ara-dalàna
FANONTANIANA "Mijoro ho an'ny zon'ny ray aman-dreny"
Navoaka tamin'ny Janoary 2018 ny Fikambanam-behivavy (Koalition Against Education Safety Sexual) mba hampiray ireo tarika samihafa izay niorina noho ny ray aman-dreny marobe mamaly ny fanambarana ny votoatin-tsoratra tanteraka amin'ny Education Compensation Sexuality toy ny fiantsoana ny Sekoly voafidy tany am-boalohany, ny tondrozotra ho fandaharanasa fanoherana ny fampijaliana. Na izany aza dia fandaharanasa tsy dia mifanentana amin'ny firaisana natao hanesorana ireo mpianatra amin'ny fitondran-tena mahamenatra mampiahiahy. Noho ny fanahiana ampahibemaso sasantsasany dia naverina imbetsaka io programa io ary nampidirina an-tsekoly amin'ny anarana maromaro. Saingy ny ideolojia sy tanjona fototra dia mitoetra ho mitovy.
Ity fandaharanasa ity dia tsy mety amin'ny mpianatra atolotra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany na faharoa. Izy io dia ahitana fitaovana sy foto-kevitra momba ny firaisana ara-nofo, izay ampianarina tsy misy fitsipi-pitondran-tena, mandrisika ny mpianatra hanandrana ny fananan'izy ireo. Ny fandaharan'asa dia napetraka manerana ireo fotodrafitrasa fototra mba tsy ahafahana manala mpianatra avy amin'ny votoatin'ity programa ity raha tsy misy fiantraikany amin'ny fanabeazana azy ireo.
Ny tanjon'ny CAUSE no mahatonga ny vahoaka hahatsapa ny votoatin'ity programa ity na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba mahomby ary mahomby, miaraka amin'ny tanjona farafahakeliny amin'ny fiantohana fa ny solontenan'ny fanabeazana dia manala tanteraka ity fandaharam-potoana ity ary manolo izany amin'ny fandaharam-pampianarana tena manohitra ny fampijaliana. MISY mikasa ny hanaraka ny zon'ny ray aman-dreny, izay misy programa any am-pianarana izay ahitana firaisana ara-nofo dia mangarahara amin'ny ray aman-dreny. Mba hiantohana ihany koa ny fandaharam-pananahana ara-pananahana dia endrika iray ahafahan'ny ray aman-dreny mitazona ny zo rehetra, tsy manavakavaka ny fanabeazana ny zanany, hanesorana ny zanany amin'ny kilasy toy izany araka ny fahamendrehany.
Izahay ao amin'ny CAUSE dia manamafy fa mitovy daholo ny olona rehetra.
Manamafy ihany koa izahay fa ao anatin'ny lalàna Aostraliana, ny olon-drehetra dia manan-jo hiaina ny fiainany araka izay tiany.
Ankoatra izany, inoantsika fa tokony hatsangana ao anatin'ny toetry ny fitondran-tena ny ray aman-dreny.